Njirimara, ngwakọta na ọrụ nke kọntinent kọntinent | Netwọk Mgbasa Ozi
Na iche akwa ụwaAnyị hụrụ otú e si kewaa ụwa anyị ụzọ abụọ. Okpokoro, uwe mgbokwasị na isi bụ isi ihe dị n'ime ya nke ekewapụtara ihe dị n'ime ụwa anyị n'ihe gbasara ụdị ihe ndị ahụ. Anyị aghaghi iche na akwa ọ bụla nwere njirimara ya na ọrụ ya na mbara ala na mmepe nke ihe ndị dị ndụ. Taa, anyị ga-elekwasị anya na ịkọwa ihe kọntinent jikọrọ ọnụ n'ụzọ zuru ezu karị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọdịdị ala na mpụga nke ụwa anyị, ebe a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
1 Wa nke ụwa na ọrụ ha
2 Ala na njirimara ya
3 Njirimara nke jikọrọ ọnụ kọntinent
4 Ihe owuwu nke kọntinent
Wa nke ụwa na ọrụ ha
Corewa bụ isi mejupụtara nkume a wụrụ awụ na nnukwu ọla a wụrụ awụ na nickel. Ndị a ọla bụ ihe na-etolite Earth ndọta na-echebe anyị mpụga ọcha nke Usoro anyanwụ kedu ka asteroids na meteorites ma ọ bụ ikuku anyanwụ na radieshon ya.
N'aka nke ọzọ, n'ime uwe ahụ bụ akwa nke akwa na ájá nke njupụta dị iche iche. Ọdịiche a dị na njupụta bụ ihe na-akpata nsụgharị ntụgharị nke na-akpata mmegharị na mwepụ nke tectonic efere. N'ihi mmegharị a nke efere, kọntinent agbanweela enyemaka nke ụwa n'ọtụtụ oge. E keghị kọntinent ndị ahaziri n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị taa. Dịka ọmụmaatụ, ekele maka ihe ọmụma nke Ọnye na -bụ Alfred Wegener? A maara ụwa na ọ bụ nnukwu kọntinent a na-akpọ Pangea.
N'ihi mmegharị nke efere tectonic ọ na-agagharị na ọnụego nke ihe dịka 2-3 cm kwa afọ ruo mgbe ọ nwere ọnọdụ dị ugbu a. Agbanyeghị, taa kọntinent ka na-aga n'ihu. Ihe na-abughi ihe mmadu na-achota anya. Kọntinent nwere ọchịchọ ịkwaga.
N'aka nke ozo, anyi nwere nkpuru elu nke mbara ala nke bu ihe jikọrọ uwa. Ọ bụ n'ime ala ụwa ebe ihe dị ndụ na ihu igwe niile anyị maara na-eto.
Ala na njirimara ya
Ala ahụ dị ihe dị ka kilomita iri anọ n’ogologo ma kewaa ya na kọntinent kọntinenti na nke oke osimiri. Na kọntinent jikọrọ ọnụ bụ onye ama ama Ihe eji eme ihe ebe a na-enweta osisi na ahịhịa kachasị ukwuu, mineral na mmanụ ala dị ka mmanụ na gas gas. Maka nke a, mpaghara a nwere nnukwu mmasị akụ na ụba na mba ụwa niile.
Ala nke ụwa bụ oyi akwa nke mejupụtara naanị 1% nke oke ahụ niile nke eluigwe. Kè n’etiti ala jikọrọ ọnụ ya na akwa mgbokwasị bụ nkwụsị Mohorovicic. Okpukpo nke oyi akwa a abụghị otu ebe niile, mana ọ dịgasị dabere na mpaghara ndị ahụ. Na terrestrial akụkụ ọ na-abụkarị n'etiti 30 na 70 km oké, ma na oké osimiri jikọrọ ọnụ ọ bụ naanị 10 km oké.
Enwere ike ịsị na ọ bụ akụkụ dị iche iche kachasị ukwuu nke ụwa, nyere ya na ọ nwere mpaghara mpaghara ụwa n'okpuru mgbanwe ndị dị iche iche mepụtara ihe omumu banyere ala na ike ndị ọzọ dị na mpụga nke na-ewu ma ọ bụ bibie enyemaka dị ka ihe dị iche iche nke ihu igwe.
E kewara akụkụ ahụ dị larịị, dịka anyị kwurula, banye na kọntinentị na oke osimiri. Mpaghara kọntinent nwere akwa oyi akwa na mejupụtara na ya ọtụtụ granitic na nwere obere basalt. N'aka nke ozo, oke osimiri enweghi nkpulu granite ma ma oge ya ma njuputa ya di ala.
Njirimara nke jikọrọ ọnụ kọntinent
Anyị ga-enyocha njirimara nke jikọrọ ọnụ kọntinent. Dịka anyị kwurula, ọ bụ akwa dị larịị na sie ike. E nwere slop na kọntinenti shelf. Anyị na-amata ọdịiche dị atọ dị na kọntinent:
Sedimentary oyi akwa. Ọ bụ akụkụ kachasị elu na nke a na-apịaji ma ọ bụ na-erughị ala. N'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, oyi akwa a adịghị, ebe n'akụkụ ndị ọzọ, ọ karịrị kilomita 3. Njupụta ahụ bụ 2,5 gr / cm3.
Granite oyi akwa. Ọ bụ akwa oyi akwa ebe a hụrụ ọtụtụ nkume dị egwu, dịka gneisses na mycaschists. Njupụta ya bụ 2,7 gr / cm3 na ọkpụrụkpụ na-adịkarị n'etiti 10 na 15 km.
Basalt oyi akwa. Ọ bụ nke kachasị dị omimi nke 3 ma na-enwekarị ọkpụrụkpụ n'etiti 10 na 20 km. Njupụta ahụ bụ 2,8 gr / cm3 ma ọ bụ dịtụ elu. A na-eche na ihe ahụ mebere n'etiti gabbros na amphibolites. N'etiti akwa granite na basalt a, enwere ike inwe kọntaktị siri ike nke P na S ga-ahụ na ala ọma jijiji. Nke a bụ ebe akwụsịsịrị Conrad.
Ihe owuwu nke kọntinent
Ihe atumatu nhazi nke uwa nwere otutu uzo akowara nke di n'elu uwa. A na-ahụ ọdịiche ndị a n'etiti etiti na ugwu.
Cratons ha bụ ebe kachasị kwụsie ike nke dịrị kemgbe ọtụtụ nde afọ. Akụkụ ndị a anaghị enwekarị ihe enyemaka dị mkpa na ọta na nyiwe gụnyere. Ka anyị lebakwuo anya na ha:
Ọta bụ mpaghara ndị nọ n'etiti etiti mpaghara ụwa. Ọ bụ ha na-ahụ maka usoro ugwu oge ochie nke ala na mbibi site na usoro nke mbuze na ndị ọrụ mpụga ndị ọzọ n'ime puku afọ ndị a. Na ebe ndị a sedimenti oyi akwa na-efu kpamkpam. Nkume ndị dị n’elu ala echekwala ma ọ bụghị ihe kpụrụ ugwu ndị mbụ. Ndị mepụtara ọta ndị a aghaghị ịnagide nnukwu nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ maka nguzobe ha, ya mere, ha dị ka ọ na-aga agha.
Nyiwe bụ ebe ndị ahụ na-eme ka oyi akwa ahụ chebe. Ọ na-adịkarị ịhụ akwa a ka apịaji.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ ugwu ndị na-egbu egbu. A hụrụ ha na nsọtụ cratons. Ha bụ mpaghara cortical nke enwetara nrụrụ dị iche iche n'ihi mmegharị na mwepụ nke efere tectonic. A na-ekesa oke ugwu kachasị ọhụrụ n'akụkụ ọnụ nke Oke Osimiri Pasifik. N'okpuru usoro ugwu ndị a okwute a dị oke oke ma rute 70 kilomita ahụ e kwuru ná mmalite isiokwu a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere jikọrọ kọntinent.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Jikọrọ ọnụ jikọrọ ọnụ